बेपत्ताकी डाई- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
स्टिल गिलासमा पानी, थालमा भात र कचौरामा दाल । छोरोलाई भनेर अङ्नामा राख्छिन् आमा । त्यसपछि रोइनाले खाइरहेछन्, जसरी फरक्क फर्केर हेर्छिन् । १८ वर्षदेखि लगातार अङ्नामा राख्दा थाल थोत्रिएछ । कचौरा कुच्चिएछ ।
माघ २५, २०७६ नवीन विभास
छोरो ‘टुप्लुक्क’ आइपुग्ला कि भनी १८ वर्षदेखि बाटो हेरिरहेकी एउटी आमा आफूले खानुअघि छोरालाई खाना पस्केर अङ्नामा राखिदिन्छिन्  । रातदिन छोरा–खोजरत उनै दाङ सिस्सन्याकी ६९ वर्षीया आमाको एक दिनको दैनिकी हो यो  । त्यो एक दिन अर्थात् २०७६ पुस २८ को ।
बिहान १०ः५७ बजे
सिस्वागँन्ज्रिनेर पुगेपछि उनका खुट्टा एकाएक ‘मूर्ति’ बन्छन् । लगत्तै उनको मुखबाट झर्छ, ‘गँन्ज्री ओराइल ट के भ्युरा फुलैल बा !’
आज त भ्युरा फुलाएको सिस्वागँन्ज्रीमा थारू बस्ती माछा मार्न निक्लनुपर्ने हो । तर, सिस्वागँन्ज्री त तालमा परिणत भइसकेको छ ।
हिँड्न आनाकानी गर्नेदाया खुट्टानेर कालो कुकुर लुट्पुटिन्छ । त्यसपछि ‘कुइँकुइँ’ गर्छ ।
‘कहाँ जैना हो मच्छी मार ? आब डेउटन का चर्हैना, का खवैना पहुनन् ? टलवक मच्छी खरिडना पैसा नै हो,’ देउतालाई चढाउने र पाहुनालाई खुवाउने माछासँगै थारू सामूहिक जीवन गँन्ज्री यादमा बतासिन्छिन् ।
सिर्गोट्या स्वरमा ‘सक्ख्या’ सुसेलेको कहाँनेर ? बलदेव उपाध्यायको कमैया ठगुसँग ‘पिरम’ मा पर्नुअघि मन माझेको बाँसघारी कहाँनेर ? परिवार, गोत्यार र टोलले भ्युरा फुलाएको कहाँनेर ? ठम्याउन झन् मुस्किल हुन्छ– कहाँनेर हो, दिल दिएको ठगुलाई भेटेको ?
कुकुर भुकेपछि सिस्वागँन्ज्री सेकुरिटीरत सिसौ डालीबाट काग भुर्र उड्दै अर्को डालीमा सर्छन् ।
‘भ्युरा फुलाएको गँन्ज्रीमा भोलिपल्ट माछा मार्न जान तयार’ उही भयानक रात आँखामा फर्केपछि करिब १०० मिटर दक्षिणमा अवस्थितघर जान उनका खुट्टा धान कुटिरहेको ढिकीजसरी पुकुलढ्याक पुकुलढ्याक गर्न थाल्छन् ।
उनको साथी अर्थात् कालो कुकुर घरी अघि लाग्छ त घरी पछि ।
बिहान ११ः१३ बजे
अङ्नाबाट एक हूल गिउँरा भुर्र उड्छन् । पछ्याउँदै एकजोर बुर्‍या–आँखा गिउँरासित लिची डालीमा लक्कु खेल्छन् । ठीक त्यसैबेला सिर्गोट्या सिसौडालीमा सुसेल्छन्, ‘स्याऽऽऽस्याऽऽऽ स्याऽऽऽस्याऽऽऽ ।’
कुकुर एकदुई आखर भुक्छ ।
सिर्गोट्याबाट तिनका आँखा फर्केर अङ्नाका थाल, कचौरा र गिलासमा बस्छन् ।
अग्ली र पातली । तर,धेरै फल्दा कुप्रिएको आरु हाँगा भएकी उनको साँवलो अनुहारभर च्याउ उम्रेका छन् । पिडौला र पाखुराका मयूरसमेत जाडोले ‘झाँक्री’बसिरहेछन् ।
सूर्य ठीक माथि देखापरेपछि हुस्सुले होस हराउँछ । चिउडोमा बायाा हात टेको लगाई कम्तीमा १० मिनेट अङ्नामै घाम ताप्छिन् । २० मिनेटपछि कलेजी–रङे गट्या भुइँमा राख्छिन् । आँखा अल्झन्छ—सेतोरङे गोन्याबाट एक्लाएक्लै बाहिरिएका त कतिले बाहिरिन साइत कुरिरहेका धागोमा ।
कौरा खाइरहेका ल्हौरा र ल्हौरिया–गुनगुन गायब हुन्छ । के सम्झेर कुन्नि ? सुनसान भकारामा पुग्छिन् । झोक्राइरहेको मेवा–बोट हेर्छिन् । भकारामा न गाई/गोरु छन् न तिनका जीउमा बसेर झिँगा र किर्ना खाँदा ससिल्याउने सिर्गोट्या । ‘च्याङ्फा’ दाङ पसेपछि भकारा सुनसानिन थालेका छन् ।
खोकेको आवाज पछ्याउँदै उनको दाया हात गोभन्नामा पुग्छ । सास फेर्दासमेत ‘गोभन्ना चुँडिए केले गोन्या अड्याउने’ भनेर ‘हेक्का’ राख्नुपर्ने बेला खोक्दाखेरि छाम्ने नै भइन् ।
एक छिनपछि भकाराबाट घरभित्र जान्छिन् । एकतले घरको छानोमा ढुंगा खसेजस्तो आवाज आएपछि झस्कँदै हेर्छिन् । खपटाले आउने बर्खा धान्लाजस्तो छैन । तर, छानो फेर्ने हब्बा छैन ।
उत्तर–दक्षिण फर्केको परम्परागत थारू घरभित्र पसेपछि डेहरीनेर पुग्छिन् । अस्टिम्की चित्र नाच्छन् । पूर्वोत्तर कुनाको डेहुरारमा ठिंग उभिन्छिन् । लगत्तै डेहरीनेर ।
दलिनमा भौका तुर्लुंग झुन्डिएको छ ।
भौकामा आँखा जुध्नेबित्तिकै दाया हात छातीमा पुग्छ । त्यसपछि खुट्टामा । बन्दुक कुन्दाको चोटले छातीमा रगत जमेको छ भने खुट्टा हिँड्न अन्कनाउँछ । बलात्कारपछि गुप्तांगबाट बग्न थालेको रगत–कुलो जारी छ ।
आमा–मन भन्छ, ‘मतलमाथि भए,मेरो रोइनालाई कोले खाना पस्किदेला ?’
दिउँसो १२ः३७ बजे
खुबै फलेको आँप–बोटनेर टोलाउँदै छिमेकीले समेत ‘रोइनाले कति खाँदो हो’ भनेका हुन् । रोइनाले रोपेको आँपघर अगाडि आमालाई सम्झाउँदै ठिंग उभिएको छ । भित्रबाहिर गर्दा रोइना सम्झेर उही आँपको बोटमा अडेसिन्छन् । आँप–बोटमा अडेसिएर अङ्नामा खाना पस्केको थाल हेर्दै पुरानो याद बल्झन्छ—करिब ६९ वर्षअघिको कुरो हो ।
बतासको सुइँसुइँमा सुत्केरी व्यथावाल आमा चिच्याहट खापिन्छ । करिब अढाई घण्टापछि नवजात शिशु रुवाइ ।
आमा चिच्याहट रोकिन्छ ।
बतास चलिरहेको बेला जन्मेकी नवजात शिशु नाउँरहन्छ, ‘बटासी ।’
ढिकी कुटेजसरी छोरा–खोजमा बतासिइरहेकी उनै आमा त हुन्, बटासी ।
जहाँ गँन्ज्री त्यहाँ थारू बस्ती । चिरामा पानी, बाँसघारी, काँसघारी, खर्सेट्टी झाँडी, रूखपातवाल भूभागलाई थारूले गँन्ज्री भन्छन् त ‘पहारी’ ले सोता । सिस्वागँन्ज्रीमा साना–ठूला कदे चिरामा पानी बास बस्छ । पानी–बासी माछा छन् । तिनै चिरामा दसैँलगत्तै सेउला, सोत्तर, बेश्रम्मा, मकैडाँठ, पराल, घाँसलाई ढुंगाले अचेट्छन् । दुई–चारकिला ठोक्छन् । गँन्ज्रीमा भ्युरा फुलाउँछन् । परिवार, गोत्यार र टोलले भ्युरा फुलाएको ‘चिनो’ लाउँछन् । माघ लाग्नुभन्दा दुई दिनअघि डुक्नीले पानी फाल्दै हेल्कामा चरिङ्ङे, गुइँटना, बाम जातका माछा र गंगटा मार्छन् । माघ १ गते एकाबिहानै नुहाइ–धुवाइपछि माछा र अक्षतासाथ मटवाँकहाँ पुग्छन् । देउतालाई माछा चढाउँछन् ।
जिम्दार परशुराम उपाध्यायको कम्लरीलाई ल्हौरिया भन्छन् । बिस्तारै परशुराम तीनपुस्ते ‘जिम्दार आँखा’ ले डस्छन् । भन्न थाल्छन्, बठिनिया ।
एक दिनको कुरा हो ।
दिल दिएको ‘ठर्‍या’ ठगुसँग बठिनियाले घरजम गर्छिन् । तीन–चार थारू महिलाले दुई–तीनवटा सियो टुप्पाले पिडौलामा एकसाथ खोप्छन् । खोपेको भागमा चिनी, गोबर, कोइला घोलेर दल्छन् । त्यसपछि ? पिडौलामा मयूर बस्छन् । पिडौलामा झाँक्रीजसरी काँपिरहेका ती मयूर त्यसै बेला बास बसेका हुन् ।
पिडौलामा मयूर बसेपछि बटासीलाई ‘जन्नी मनै’ भन्छन् त बटासी–पति ठगुलाई ‘ठारू मनै’ ।
बटासी चार छोरा र तीन छोरीका आमा बन्छिन् । कान्छा साउदीबाट ‘बाकस’ मा फर्कन्छन् । कान्छी बुहारीले दुई वर्षपछि अर्को घरजम गर्छिन् । अहिले नातिनी उनै बुहारीसँग छिन् ।
माइली छोरीको लक्ख्वारमा बिहे भएको छ ।
साइँला बेपत्ता । बाँकीमध्ये कति बच्पनमै त कति तन्नेरिन थाल्दा मास छर्छन् ।
दिउँसो ३ः११ बजे
घरदेखि दुई सय मिटर पूर्व पुगेलगत्तै बटासी–खुट्टामा ब्रेक लाग्छ । ठीक त्यसैबेला चारतला घरको छतबाट टाउकोमा कुनै जिनिस फुट्ट खस्छ । कागे हग्यो भनेर छाम्छिन् । चिसो लाग्छ । घरको चौथो तलामाथि टाइसुट र दारीवाल अधबैंसे पान चपाउँदै छन् ।
गट्याले पुछ्दै भएभर गाली गर्छिन् । तर, भुइँबाट त्यति माथि त्यो गाली टाइवालाकहाँ कसरी उक्लन सक्नु !
समय फेरिन्छ । जिम्दार जग्गामा झन्डा गाड्ने पार्टी नै सरकारमा पुग्छ । पुलिस पठाउँछ । अँधियावाल थारू खेदेर जिम्दार, जग्गा दलाल र झन्डा गाड्नेवालले ‘प्लटिङ’ गर्छन् ।
‘कठ्ठें हो, ठगुक जोट्लक ? कठ्ठें रगेड रगेड मुँस मर्लक ? लाल झन्डा गर्लक कठ्ठें हो,’ पति ठगुले जोतेको, खेदीखेदी मुसा मारेको, हसियाँ हथौडा–अंकित रातो झन्डा गाडिएको अँधिया खेत कहाँनेर हो भनेर सम्झन कोसिस गर्छिन् ।
ठगुले जोतेको खेतमा अग्लाअग्ला घर उभिएका छन् त कति उभिन तर्खरिंदै । झन्डा गाड्ने ‘कमरेड’ बोली कानमा ‘रिप्ले’ हुन्छ, ‘जग्गा कसको ? जोत्नेको । घर कसको ? पोत्नेको ।’
दिउँसो ३ः२९ बजे
‘डाई, भुँख लागल ।’
जुँगा उस्तै । आँखा उस्तै । कपाल उस्तै । बस्, कमैया छाडी फर्निचरमा काम थालेका रोइना ‘आमा, भोक लाग्यो’ भनिरहेछन् ।
भात पस्केर दिँदा अडेसिएको आँपको फेदमा हात ठोक्किएपछि बटासी ब्युँझन्छिन् ।
लामो अन्तरालपछि रोइना आमा सपनामा आउँछन् । पहिले सपनामा ‘धेरै देखेर’ होला, आमा सपनामा रोइना आउन छाडेको ।
आँपको फेद अडेसिएर घाम ताप्दा झमक्क निदाएकी हुन् ।
आँखा मिच्दै बटासी जुरुक्क उठ्छिन् ।
भित्र पसेर बरीनेर उभिएर भन्छिन्, ‘टुऽऽऽरटुऽऽऽर टुऽऽऽर टुऽऽऽर ।’
‘कोट्कोट्’ गर्दै जवाफ दिने भाले बरीमा छैनन् ।
दिवंगत नाति र बुहारी सम्झन्छिन् ।
सरासर तुर्लुंगिएको ‘भौका’नेर जान्छिन् ।
कमान्डर कासन कानमा फेरि बज्छ, ‘फायर !’
बन्दुके गोलीले कालिज भुइँमा भुट्ट खसेजसरी भौका भुइँमा खस्छ । एकपालि होइन । सयौंपालि । डेहरी फुटाएर धान रेल्लाएको नि सयौँपालि ।
हो, उही भौका झिकेर हेर्छिन् । छन्–खुट्टामा लाउने सिल्टीका कारा, चिर्‍वा, पैरी । खुट्टाको औंलामा लाउने भिछा । हातमा लाउने ककनी रटर्‍र्या । कानमा लाउने झिल्मिलिया । रोइनाको जिन पाइन्ट र प्लास्टिकले बेरेको बिजोर चप्पल । कोन्टीभित्र पसेको ‘दुब्लो उज्यालो’ मा रोइनाको पाइन्ट र चप्पल–बाटो भएरआमा–मन भक्कानो भएर ओरालिन्छ ।
कुरो २०५८ पुस २७ गते मध्यरातको हो । अर्थात् सबभन्दा ठूलो पर्व ‘माघ’ मनाउन थारू गाउँ नै भोलि माछा मार्ने, पर्सि सुँगुर काट्ने र निकुर्सि ‘सखी ए हो, माघक पिली गुरी जाँर’ गाउने ।
मध्यरातमा ‘ढ्याङ्ङ ऽऽऽ’ आवाजसँगै बन्दुकभित्र पस्छन् । ‘भरेभोलि’ भएकी बुहारी कोन्टीमा चिच्याउँछिन् । लगत्तै छोरा रोइना ।
सानो छँदा धेरै रोएकाले साइँला–पुत्रको नाउँ राखिदिएका हुन्, रोइना ।
मध्यरातमा बुहारीको इज्जत र छोराको ज्यान जोगाउन अनुनय गर्छिन् । एकपालि होइन, सयपालि । त्यही अनुनय दुई वर्षपछि पति बचाउन दोहोर्‍याउँछिन् । तर, उनको छातीमा तेर्सिएर बन्दुक सर्त सोझिन्छ, ‘...दिन्छस् भने तेरो पोइ बच्छ ।
नत्र ...।’ उनले तुलामा ‘इज्जत’ र पति ‘प्राण’ राख्छिन् । पति प्राण भारी लाग्छ ।
त्यसलगत्तै डेहरी दायातिर रक्तमुछेल ठगु ढल्छन् त बायातिर बलात्कृत बटासी ।
‘म्वार ट साँस किल बा, का कर मुव नै डेल्या !’ बन्दुक बाटो लागेको डेढ घण्टापछि मुस्किलले निक्लेको ठगु–बोली बन्दुकजसरी पड्कन्छ । उपचार–अभावले एक महिनापछि ठगु ‘माथि’ लाग्छन् ।
त्यो मध्यरात लुगासमेत लाउन नदिई बन्दुकले रोइना लान्छन् । भोलिपल्ट गँन्ज्रीमा माछा मार्न तयारिएका डुप्का र हेल्का तितरबितर भएका छन् ।
कोन्टीमा चिच्याउने रक्तमुछेल बुहारी र नाति चार दिनको अन्तरमा नफर्कने बाटो लाग्छन् ।
भौनी आवाजसँगै हुस्सुले हुस्सिएको खर्सेट्टी झाँडीतिर दगुर्छन् ।
‘रोइनाको चप्पल ।’
बन्दुकले रोइना लगेको भोलिपल्ट झाडीनेर एउटा चप्पल हिलो र रगतले लटपटिएको भेटिन्छ । रोइना नै भेटिएजसरी उत्तानो परेको बाया चप्पल नियाल्छन् । एक साताअघि घोराहीमा साठी रुपैयाँमा किनेको भोटाक्या चप्पलको दाया पनि खोज्छन् ।
रोइना खोज्दै बन्दुक–खाना पुग्छन् ।
बुट्कामा ‘बेरी’ लिएर छोरा–खोजमा निक्लेकी बटासी बन्दुक–खानामा ‘छोरा भोकायो होला’ भन्दै अनुनय गर्छिन्, ‘छावा भँखाइल हुई ।’
‘मा...बूढी, निक्लिइस् कि उडाइदिम् ।’
बन्दुक नाल छातीमा सोझ्याएपछि बेरी बन्दुक–खानामै छोडेर निक्लन्छिन् ।
भोलिपल्ट फेरि पुग्छिन् । भन्छन्, ‘फोटो लिएर आ बूढी । फोटो नहेरी कसरी चिन्ने, तेरा छोरो ।’
नागरिकता बनाउँदा खिचाएको एउटा पानीफोटो हात पार्छिन् । वल्टाइपल्टाइ पारेर भन्छन्, ‘ह्याँ छैन, बूढी ।’
‘कहाँ जाई ?’
‘तेरो छोराको हाम्ले ठेक्का ल्याछम् ?’
थचक्क बस्छिन् ।
बटासीलाई फुटबल बनाएर बन्दुकले गेट निकाला गर्छन् ।
भौकामा राखिएका रोइना सामानमा आमामन ओरालो झरिरहेको बेला ‘बडाई’ भन्दै भतिज खुसे ख्वास्स पस्छन् ।
खुसे र रोइनासँगै हुर्केका हुन् । कमैया बसेका हुन् । खुसे बन्दुकबाट संयोगले बाँचेका हुन् । अहिले त बन्दुक यति ‘थारू–फोबिया’ छ भने त्यो जुगको के कुरा !
भौकासँग भक्कानिएकी बटासीलाई सम्झाउन खुसे कोसिस गर्छन् ।
जिन्दगीमा खिचाएको उही नागरिकतावाल पानीफोटो पनि बन्दुक–खानामा गायब भएपछि आमाले खुसे हेर्दै रोइना–तिर्खा मेट्छिन् ।
भौकामा सामान राखेर दलिनमा झुन्ड्याउँदै खुसे सोध्छन्, ‘बडाई ! काठमान्डुसे कहिया अइली ?’
छोरा–खोजमा काठमाडौं पुगी बटासी फर्केकी हुन् ।
काठमाडौंको बेपत्ता परिवारको कार्यक्रममा बटासी देख्छिन्, ‘दौरासुरुवाल’ वाल प्रधानमन्त्री, जिम्दार जग्गामा लालझन्डा गाड्ने कमरेडका सुप्रिम कमान्डर र आफ्नो छोरा बेपत्ता पार्ने सरकार नाइके । काँटीकुटी ‘जिम्दार’ का पनि जिम्दार लाग्छ । आफ्नो छोरा बेपत्ता पार्ने, आफ्नो र बुहारीको इज्जत लुट्ने ‘बन्दुक’ जस्तो लाग्छ ।
बटासीलाई भन्कारा छुट्छ ।
दुई छोरा बेपत्ता पारिएकी आमाले माइक खोसेर बोलेको बोलीबाहेक अरू उनको कानमा बज्दैन– ‘छोराछोरीका मोबाइल आधा घण्टा मात्रै ‘स्विच अफ’ हुँदा ‘कहाँ गए होलान्’ भनेर कति चिन्ता लाग्छ, आमाबालाई ? २०/२२ वर्षसम्म छोराछोरी बेखबर हुँदा हामी कसरी बाँचेका छौँ ? सुत्नुअघि आधा सेकेन्डमात्र भए नि तपाईंहरूले हाम्रो ठाउँमा आफूलाई राखेर हेर्नुहोला ।... कहिलेसम्म पर्खने ? न्याय कहिले पाउने ? अहिल्यै जवाफ चाहियो ।’
बेलुकी ६ः१३ बजे
स्टिल गिलासमा पानी, थालमा भात र कचौरामा दाल । छोरोलाई भनेर अङ्नामा राख्छिन् । त्यसपछि रोइनाले खाइरहेछन्, जसरी फरक्क फर्केर हेर्छिन् ।
१८ वर्षदेखि लगातार अङ्नामा राख्दा थाल थोत्रिएछ । कचौरा कुच्चिएछ ।
भित्र पस्नुअघि पतिको किरिया नहुँदासम्म बाटोमा खाना राखिदिएको सम्झन्छिन् । सम्झन्छिन्, चोखिएको दिन ‘आब जिन अैहो’ भनेर बाटो बन्द गरेको पनि । रोइना ?
न जिउँदो, न मरु खबर छ । १२ वर्षमा त खोला पनि फर्कन्छ भन्छन् । तर, १८ वर्ष बिते पनि रोइना फर्केका छैनन् । छोरा–खोजमा घाइते बटासी–गोडा अझै थाकेका छैनन् । एकदिन छोरो ‘टुप्लुक्क आउनेछ’ भनेर ‘आमामन’ पलाइरहन्छ, ‘डाई ! निके बा ? मै ट अइलुँ, कहटी एक रोज रोइना घुमी ।’ छोरालाई अङ्नामा खाना राखिदिएपछि बल्ल आफूले खान्छिन् । तर, आज ? नखाई ओछ्यानमा घोप्टो पर्छिन् । कुखुरा बस्ने बरीनेर कुकुर कुइँकुइँ गर्छ । ठीक त्यसैबेला जिम्दार–टीभीले कुकुर कुइँकुइँलाई ओभरल्याप गर्छ, ‘प्रधानमन्त्री ओली रसत्तारूढ दल अध्यक्ष दाहाल उपचारार्थ सिंगापुर उडे भने प्रमुख विपक्षी दल नेता देउवा अमेरिका भ्रमणरत छन् ।’
(लेखक ‘जनयुद्ध’ का बेला केही समय भैरवनाथ गणमा बेपत्ता बनाइएका थिए । यस कथामा प्रयुक्त थारू भाषाका शब्द जस्ताको तस्तै राखिएको छ ।)
प्रकाशित : माघ २५, २०७६ ११:३६
माघ २५, २०७६ राजव
अब उसको दृष्टिको भविष्य राता पुलिसको हातमा छ  । यो वाक्य ‘ऊ कुन चीज हो ?’ शीर्षकको मेरो कथाको अन्तिम वाक्य थियो ।
राजधानीको एक प्रतिष्ठित त्रैमासिकमा निकै पहिले यो कथा छापिएको थियो । प्रतिक्रियामा पाठकहरूले प्रयोग गरेको शब्दमा भन्ने हो भने यसलाई निकै पावरफुल कथा मानिएको थियो । तर, यो कथाबारे पाठकको जिज्ञासा सकिएको थिएन । विशेषगरी हरिसिंह कार्कीबारे उनीहरू निकै कौतूहलमा थिए । हरिसिंह कार्की कथाको नायक थियो । पाठक, दर्शकहरूको सहानुभूति नायकतिर नै हुन्छ । खलनायकतिर के हुनु ?
कोहीकोही पाठक खलनायकको पक्षमा पनि ढल्कन सक्छन् । यो कुरो पाठकको विचार, संस्कार, आर्थिक स्थिति, शिक्षा र रुचिमा भरपर्छ । यस मामलामा पाठकहरू स्वतन्त्र हुन्छन् ।
‘ऊ कुन चीज हो ?’ कथाका खलनायक राता पुलिसहरू थिए । कथामा काला पुलिस पनि थिए । दुवै, नायक हरिसिंह कार्कीका लागि खलनायक थिए । राता पुलिस र काला पुलिस एकअर्काका अत्यन्त दुस्मन थिए । काला पुलिस सरकार पक्षका थिए, राता युद्धरत पक्षका । भर्खर संसदीय व्यवस्था उदित भएको महाकविको सानो सुन्दर नेपालमा दुवै घमासान लडेका थिए । युद्धभन्दा प्रचार र आतंक धेरै थियो । यो इतिहासको कुरो थियो । कथा हरिसिंह कार्कीको बारेमा केन्द्रित थियो । कथा अगाडि बढ्दै गएपछि राता पुलिसले हरिसिंह कार्कीको अपहरण गरेको होस उड्ने बयान आउँछ ।
कुरो संगीन थियो । माम्लो अपरहणको । अपहरणकारी माओवादी । टुंग्याउनका लागि कथा टुंग्याएजस्तो भयो । कथा अगाडि बढिरहनुपर्थ्यो । अपहरणपछि हरिसिंह कार्कीलाई राता पुलिसले कहाँ लगे ? मारे कि ? काटे कि ? छाडे कि ? के गरे ? कथाबारे पाठकका यस्तै कौतूहलपूर्ण प्रश्नले मलाई लखेटिरहेका थिए । कति लखेटिनु ? त्यसकारण जवाफमा म यो पूरक कथा लेख्दै छु । पूरक कथा प्रारम्भ गर्नुपूर्व ‘ऊ कुन चीज हो ?’ कथाको उपरोक्त अन्तिम वाक्यभन्दा अगाडिको प्रसंग के थियो त्यसको केही अंश उद्धृत गर्न जरुरी हुन्छ । तलका वाक्यहरू त्यसै प्रसंगका हुबहु उतार हुन् ।
ऊ फेरि चुप छ । आतंकित छ । रातमा चारैतिर स्यालहरूको हुइयाँ चर्किरहेछ । नजिकै राता पुलिसले आगो बालेका छन् ।
त्यसकारण उसको शरीरको एक छेउमा न्यानो राप परिरहेछ । माघको महिना भएको हुनाले वातावरणमा चिसो झन्झन् फैलिरहेछ । फेरि त्यही स्वरले सोध्यो, ‘साला तँ कुन चीज होस् ? कुन जिनिस् होस् ? हामीले जान्न चाहेको यै हो ...तँ मन्डले होस् कि, सुन्डले होस्, कांग्रेस कि सीआईडी होस् ? कुन चीज होस् ...?’
‘मैले भनिहालें केही समयअगाडिसम्म म विद्यार्थी थिएँ ...अब जागिर खोज्न थालेको बेकारी भएको छु ...।’
‘योबाहेक तँ अरू के होस् ? तेरो बाउ कांग्रेस, तँ के होस् ?’
‘म गाउँमा हुर्के–बढेको साधारण किसानको छोरा हुँ । एउटा जागिर पाए म सन्तुष्ट हुने थिएँ । मेरो अरू कुनै सोख छैन, म आफ्नै स्वतन्त्रतामा रमाउने मान्छे हुँ ।’
‘के रे ...आफ्नै स्वतन्त्रता ? आफ्नै स्वतन्त्रताको कुरा बुर्जुवाहरू मात्र गर्छन्, थाहा छ तँलाई ?’
यसपछि उनीहरूले खासखुस सुरु गरे । खासखुसमा उनीहरूले यस्तो मान्छे शंकास्पद र खतरनाक हुन्छ भन्ने छलफल गरे । र, फेरि ऊतिर खतरनाक तरिकाले फर्के ।
रात वयस्क भइसकेको छ । अलिअलि जाडो र डरले उसको शरीर भित्रभित्र कामिरहेको छ । उसको आँखामा रातो पट्टी यथावत् कडासँग कस्सिएकै छ । अपरहणपछि उसलाई तीन मोटरसाइकलसहित ढुकेर बसेका अर्का राता पुलिसले बीचको मोटरसाइकल पछाडि बसाएका थिए । चालक रातो पुलिस थियो, ऊ पछाडि कोच्चिएर अर्को रातो पुलिस बस्यो । बीचमा पाउरोटीमा दलेको ब्ल्याक बेरी जामझैं ऊ बसेको थियो । त्यसपछि उसको अगाडि–पछाडि गरेर तीन मोटरसाइकल सक्दो रफ्तारमा बीस मिनेट हुइँकिएका थिए ।
अब पूरक कथा प्रारम्भ हुन्छ—
नकटुवा गाउँमा पुगेपछि तीनवटै मोटरसाइकलको ब्रेक लाग्यो । राता पुलिसले उसलाई हरदेव लालको खलिहानमा ओराले । नकटुवा गाउँको धनीमानी किसान हरदेव लाललाई माओवादीहरू एक नम्बरको गरिबमारा चुसाहा मान्थे । यो यथार्थ थियो । माओवादीहरूले उसको सब खेतका पाकेका धानबाली लुटेका थिए । खलिहान कब्जा गरेका थिए । हरदेव लालको त्यही खलिहानमा दस–आठ अरू राता पुलिस उनीहरूलाई कुरिरहेका थिए । मोटरसाइकलबाट ओरालेपछि राता पुलिसहरूले उसलाई भुइँमा थचारे । दुई राता पुलिस मिलेर उसको दुवै हात सन्ठीको डोरीले बाँध्न उसको नाडी समाउँदै थिए । उसको आँखामा रातो पट्टी यथावत् कस्सिएकै थियो । ऊ चर्को त्रासमा थियो । र, पिसाबले उस्तै च्यापेको थियो । अपहरणको आतंकमाथि पिसाबको तोडले ऊ थप यातनामा देखिन्थ्यो । यसबाट उम्कन कुन बेला कट्टु खोल्न पाउँलाको जपमा रहेको उसले हात बाँध्न खोजिरहेका राता पुलिसलाई त्रसित स्वरमा भन्यो, ‘मैदान जाए के बा ।’
‘लम्हर कि छोट्का रे चुतिया ?’
निर्दयी हाँस्दै तिनले उसलाई भनेका थिए, ‘कट्टुमै फेर ।’
अर्को कुनै सिनियरले तिनलाई हप्काउँदै अह्रायो, ‘अबे बेवकुफ स लबरतिनु काहे ? फेरवा के ल्याव स जल्दी ।’
अर्डरमुताविक तुरुन्त तीमध्ये दुई राता पुलिसले उसको पाखुरा समाउँदै भनेका थिए, ‘चल चुतिया ।’
तिनले उसलाई घचेड्दै छेउको खेततिर लगे । र, ऊ पछाडि उभ्भिँदै भने, ‘चल, होक ।’
यो आदेश पाएर उसले फस्नर खोलेको थियो । केही बेरमा ऊ हल्का भयो । त्यसपछि तिनले उसलाई खलिहान फिर्ता ल्याए । डोरी लिएर उसलाई कुरिरहेका अर्का तीन राता पुलिस मिलेर उसका दुवै हात बाँधे । र, भने, ‘बैठ भेडी चो... ।’
सुन्नासाथ ऊ चिसो भुइँमा थचक्क बसेको थियो । खलिहानको बीचमा ठूलो दायराको घुर बालिएको थियो । त्यसको राप उसको भागमा पनि अलिअलि आइपुगेको थियो । त्यहाँ भएका राता पुलिस कमरेड लालबहादुर कुर्मीको प्रतीक्षामा थिए । ऊ वीरगन्जबाट मोटरसाइकलमा आउंदै थियो । कमरेड लालबहादुर त्यताका योद्धाहरूको कमान्डर थियो । ऊ र केही कमरेड फिरौती र चन्दाको रकम असुल्न वीरगन्ज गएका थिए । असुलीको त्यही रकम कोचेको ब्याकप्याक अँठ्याएर ऊ फर्कंदै थियो । ऊ कमरेड हितनारायण कोइरीले हाँकेको मोटरसाइकलमा थियो । सुरक्षाका लागि खटेका अरू चार मोटरसाइकल उसको अगाडिपछाडि गति मिलाएर कुदिरहेका थिए । तिनैको प्रतीक्षामा थिए, खलिहानमा घुर तापिरहेका कमरेडहरू । ती कमरेडमध्ये एउटाले बाँकी कमरेडलाई आदेश दिएको थियो, ‘चल गाव स ।’
यो लाल अर्डर सुन्नासाथ जनवादी ढोलकियाले ढोलक ठटाउन थाल्यो । त्यसको तालमा अर्कोले खैंजडी बजायो । यी दुवै बाजाको सम्मिश्रित तालमा बाँकी गर्जंदै गाउन थाले– जनता के चलाव पलटनियाँ हो चलाव पलटनियाँ हिलाव जिमिंदरवारवा हिलाव सिंहदरबारवा जनताके चलाव पलटनियाँ हिलाव कठमंडु हिलाव दुस्मनवाँ हिलाव मन्त्री हिलाव सन्त्री जनता के चलाव पलटनियाँ हो चलाव पलटनियाँ मौन कामिरहेको ऊ तिनको लालगान लीला सुनिरहेको थियो । तीमध्येको एउटालाई उसको मौन असह्य भएछ । कड्कियो, ‘अरे ओ सकार के चुतर हम्नी के गीत तोहरा के भात नै खे का ?’
‘एकरा के छौंडी के गीत न सुनाद, मजा ली !’
यो कुरोमा सब गलल हाँसे । तिनले उसलाई आदेश दिए, ‘चल हम्नी सँगे गा, चल बोल ।’
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको जनसंगठनले गाउने गीतलाई तिनले आफ्नो सन्दर्भमा ढालेर गाउने गरेका थिए । हरिसिंह कार्कीलाई यसको ओरिजनल गीत पनि आउँथ्यो । ऊ तीसँगै त्यसको प्यारोडी गाउन थाल्यो– हिलाव दुस्मनवाँ हो हिलाव दुस्मनवाँ जनता के चलाव पलटनियाँ हिलाव दुस्मनवाँ तिनको गानबीच टाढाबाट मोटरसाइकलको घर्रघर्र, ढटढटको कर्कश आवाज आउन थाल्यो । गाना रोकेर एउटाले भन्यो, ‘बुझा ता कमरेड स ।’
अर्कोले कान थाप्दै भन्यो, ‘वैसने बुझाता ।’
तिनको अन्दाज सार्थक पार्दै एक छिनमा गडगडाएर चार व्रायल इनफिल्ड मोटरसाइकल खलिहानछेउ आएर रोक्किए । कमरेडहरू फुर्तीका साथ त्यसबाट फटाफट ओर्लिए । खलिहानका भुरा कमरेडहरू सब उठे । ऊ पनि उठ्यो । सब एकसाथ गर्जिए, ‘लाल सलाम कमरेड ।’
‘लाल सलाम, लाल सलाम ।’
कमरेड लालबहादुरले उसको अनुहारमा टर्च बाल्दै सोध्यो, ‘इए ह रघुनाथपुर गाँव के कंग्रेसिया के डाउटफुल बेटवा ?’
‘जी कमरेड ।’
उसको हात, मुख घुर्दै लालबहादुरले आदेश दियो, ‘यसको आँखाको पट्टी, हात खोल्दे, अब यो भाग्छ काँ, भागे मर्छ ।’ लालबहादुरले वीरगन्जसँग जोडिएको सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलको एक भुच्चढ पुलिससँग किनेको पिस्तोल देखाउँदै भन्यो ।
सँगैको कमरेड आदेश पालन हेतु उसको आँखाको पट्टी, हातको डोरी फुकाउन अघि सर्‍यो । लालबहादुरले आफ्नो क्यामोफ्ल्याग पाइन्टको खल्तीभित्र पेस्तोल घुसार्‍यो । आदेश पालन गर्नेले उसको आँखाको पट्टी, हातको डोरी फुकायो । र, पर घुरमा हुर्‍यायो । डोरीबाट मुक्त भएपछि उसका हात निकै हल्का भए । उसका आँखाले रातको धर्ती देख्न पाए । कहाँ छु भन्ने बुझ्न पाए । बन्धनका उसका हात चिसोले निकै कठ्यांग्रिएका थिए । र, शून्य हुन थालेका थिए । तिनलाई तताएर ज्यान फुक्न उसले दुवै हात माड्न थाल्यो । बेथनापुर हाइस्कुलको शिक्षक मारिएझैँ मारिने हुँ कि ? वा अर्को कुनै यातना दिएर यिनले सताउने हुन् कि ? त्रस्त ऊ यस्तै, यस्तै सोच्दै थियो । उसको मुन्टो भुइँतिर झुकेको थियो । रात उक्लिरहेको थियो र चिसो निकै बढेको थियो । उसको जीउमा सुइटर, मफलर पनि थियो । तर, त्यसले उसलाई पुगिरहेको थिएन । डर, चिसो, जाडोले ऊभित्र कम्प चलिरहेको थियो । बतासको थप्पड खाँदै भर्खर मोटरसाइकलबाट ओर्लिएको लालबहादुरका, नाक कान, हात पनि चिसै थिए । घुरको ज्वाला हेर्दै लालबहादुरले उसलाई भन्यो, ‘चल घुर लगे ।’ लालबहादुर हात माड्दै घुरतिर लाग्यो । तर, ऊ यथास्थानमा पूर्ववत् विवश उभ्भिइरहेको थियो । लालबहादुरले ‘चल घुर लगे’ कसलाई भनेको हो उसले बुझिरहेको थिएन । उसलाई पहारा दिइरहेको एक कमरेड कड्क्यो, ‘अरे कुत्ता के दुम सुनत नैख का कमरेड का कह ताडेन ?’
यसपछि ऊ घुरतिर गयो । लालबहादुरले उसलाई आफूसँगै बस्न अह्रायो । घुरको न्यानो पाएर उसको शरीर बिस्तारै फुक्न थाल्यो । लालबहादुरले केरकारको पहिलो प्रश्न सोध्यो, ‘रघुनाथपुर किन आएको रे ?’
‘म घरमा आएको हुँ, मेरो गाउँ हो ।’
‘कसको छोरा ?’
‘रामसिंह कार्की ।’
‘ए ! त्यै कांग्रेसीको छोरा पो, अच्छा । कत्ति दिन भयो गाउँ आएको ?’
‘दस दिन ।’
‘के उद्देश्यले आएको ?’
‘म आफ्नू घर आएको हुँ ।’
‘यो दस दिनसम्म बस्नुको मतलब ?’
‘आफ्नो घर हो, जहाँ पूरै जीवन बिताइन्छ ।’
‘त्यो त हो, तर दस दिनमा कांग्रेसी गतिविधि पनि खुब गरियो होला नि ?’
‘म कांग्रेसी हैन ।’
‘बाउ कांग्रेस, छोरो के त ?’
‘मान्नुस्, मेरो संलग्नता कुनै पार्टी वार्टीसँग छैन ।’
‘हाम्रो सुराकीमा खटिएर आएको त हैन ?’
‘यो सुन्दा पनि मलाई घृणा लाग्छ ।’
‘अनि काठमान्डुमा के गरिन्थ्यो ?’
‘एम ए ।’
‘कुन विषय पढेको ?’
‘अंग्रेजी साहित्य ।’
‘सेक्सपियर मात्र पढ्या छ कि मार्क्स पनि पढ्या छ ?’
‘दुवै पढ्या छु ।’
‘एंगेल्स को हो थाहा छ ?’
‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोबारे जानकारी छ ?’
‘विश्व सर्वहाराका नेता, महान योद्धाहरू लेनिन, स्टालिन, माओ, चे, चुतेह, क्यास्ट्रोबारे जानकारी छ ?’
‘बोल्सेविक पार्टीबारे ज्ञान छ ।’
‘मेनसेविक र बोल्सेविक पार्टीबीचको भिन्नता थाहा छ ?’
‘अक्टोबर क्रान्तिको बारेमा जानकारी छ ?’
‘चिनी क्रान्तिबारे अध्ययन छ ?’
‘महान् क्रान्तिपुरुष माओलाई पढेको छ ?’
‘होची मिन्ह, चाउ एनलाई को हुन् थाहा छ ?’
‘यत्ति अध्ययन भएको मान्छे, कम्युनिस्ट नभएर मूर्ख किन भएको ?’
अब यो प्रश्नमा के भन्नु ? यसमा ‘छ’ मात्र चल्नेवाला थिएन । त्यसकारण ऊ पूर्ववत् ओठबन्दीमा लाग्यो । लालबहादुर कड्क्यो, ‘यत्ति धेरै अध्ययन हाम्रो सुराकी गर्न त गरेको हैन ?’
‘मैले भनिसकें म यो कर्मलाई घृणा गर्छु ?’
‘त्यसो हो भने कम्युनिस्ट किन नभएको ?’
‘मलाई स्वतन्त्र हुन मन पर्छ ।’
‘देशमा यस्तो अन्याय, अत्याचार, शोषण, गरिबी छ । तिमी यत्ति पढेको मान्छे स्वतन्त्र बस्न मिल्छ ?’
‘हेर्नुस्, मलाई यहाँ ल्याउने तपाईंका कार्यकर्तालाई पनि भनिसकेको छु म केही हैन जागिर खोजिरहेको बेकार हुँ ।’
‘आफू मात्र जागिर खोज्ने कि लाखौँ बेरोजगारलाई काम दिने व्यवस्था स्थापनामा लाग्ने ?’
यस्तो महान् विचार नकार्ने उसको के सामर्थ्य ? लज्जित मुद्रामा ऊ मौन भयो ।
एक छिन कमरेड लालबहादुर पनि मौन भयो । वरिपरि छरिएका, घुरमा हात–ढाड सेकिरहेका राता पुलिसहरू, कमरेडहरू सब अदब मुद्रामा मौन थिए । गाउँका फटिचर कुकुरहरू मात्र भुकिरहेका थिए । उखुबारीभित्र पसेका स्यालहरूको हुइँया पनि रोक्किएको धेरै भइसकेको थियो । यत्तिकैमा साम्यवाद अहिल्यै खस्छ कि भनेझैँ गरेर एकाएक लालबहादुरले आकाश हेर्न मुन्टो ढाडपछाडि ढल्कायो । फेरि सीधा पार्‍यो । एकाएक केही सम्झेझैं गरेर भन्यो, ‘अँ यत्ति धेरै पढेको तिमी हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई पढाउन सक्छौ ?’
त्रस्त सोचमा डुबेको ऊ अलि हल्का भएको थियो । अरू कमरेडको कान अब यसले के भन्ला भन्ने सुन्न ठाड्ठाडा भएका थिए । उसले बिस्तारै भन्यो, ‘सकुँला ।’
लालबहादुर फेरि कड्क्यो, ‘सकुँला कि सक्छौ ?’
‘तिनलाई तिमीले सैद्धान्तिक प्रशिक्षण दिनुपर्छ ।’
यो उसको ज्यान जोगाउने जवाफ थियो । ऊ निकै कम्पकम्पीमा थियो ।
‘त्यसो हो भने ल सुन, तिमीले चार महिना यिनलाई, मार्क्स, माओ, लेनिन, चे, क्यास्ट्रोलगायत कम्युनिज्मको सब बेसिक सिद्धान्त पढाउनुपर्छ । तिमीले चाहने हो भने हामी तिमीलाई संगठनात्मक तालिम दिन्छौं । तर, कर गर्दैनौं । हाम्रा कमरेडलाई प्रशिक्षण दिँदादिँदै के ठेगान तिमी आफैं कम्युनिस्ट भयौ भने खुसीको कुरा हुनेछ, नत्र केही छैन, त्यसपछि हामी तिमीलाई सुरक्षित मुक्त गर्नेछौं, हुन्छ ?’
हुन्न भन्ने उसको के सामर्थ्य । उसले लुत्रुकिएर भनेको थियो, ‘हस् ।’
‘तिमी तोकेको चौहद्दी छोडेर कहीँ जान पाउँदैनौ, तिम्रो खानेबस्ने सुरक्षित व्यवस्था हुनेछ । त्यतिन्जेल तिम्रो हालचाल, तिम्रो परिवारलगायत कसैले पनि पत्तो पाउनेछैन ।’
लालबहादुर कमरेडले उसको भविष्यको यस्तो निर्धारण गरेपछि कार्यकर्ताहरूले उसलाई गाउँकै कुनै कमरेडको घरमा लगेका थिए । घरको ओसारामा भेला हुने जुझारु कमरेडहरूलाई ऊ कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोदेखि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको सब अवयव र त्यसका सैद्धान्तिक पक्ष सरल ढंगमा पढाउन थाल्यो । प्रशिक्षण रातिराति लालटिनको उज्यालोमा हुन्थ्यो । दिउँसो कार्यकर्ता कहाँ जान्थे, के गर्थे उसलाई थाहा हुँदैनथ्यो । यो उसको वास्ताको कुरो पनि थिएन । ऊ बिल्कुल बन्दी प्रशिक्षक भूमिकामा थियो । कसले, कसरी निगरानी गरिरहेछ भन्ने उसलाई पत्तो हुँदैनथ्यो । भाग्ने कोसिस नगर्नू भन्दै उसलाई यसको हिदायत दिइएको थियो । ऊ दिनरात सशंकित र त्रस्त भइरहन्थ्यो । पहिलो ब्याचका पच्चीस जनालाई उसले प्रशिक्षित गरिसकेको थियो । दोसो ब्याचकालाई पढाउने काम चलिरहेको थियो ।
यस ब्याचकालाई प्रशिक्षण दिन थालेको चौथो रातको कुरो थियो । त्यस रात यो ब्याच, लगभग डेढ सय पुलिस र सैनिकको भयानक संयुक्त रेडमा परेको थियो । यो रेड अमेरिकी नेभिसिलले गरेको रेडझैं सब साटसुट, पाटपुटमा भएको थियो । कोही उम्कन पाएनन् । एकाएक सब जालमा परेको पोठिया माछा भएका थिए । घरका परिवारसमेत क्याप्चरमा थिए । एकएकलाई ट्रक र भ्यानमा हालेर दस कोस परको सैनिक ब्यारेक लगिएको थियो । त्यसपछि तिनको के हाल भयो अहिलेसम्मको पत्तोमा छैन । तिनलाई बेपत्ता मानिएको छ । माओवादीहरूले तयार गरेको आफ्ना कार्यकर्ताको बेपत्ता लिस्टमा ती सबको नाम छ । तर, त्यहाँ हरिसिंह कार्कीको नाम छैन । यो कथामा बाहेक हरिसिंह कार्कीको नाम कतै उल्लेख छैन । लिस्टबाट पनि बेपत्ता छ, हरिसिंह कार्की । पत्तो हुने लालबहादुर अहिले सरकारमा छ । तर, मौन छ ।
प्रशिक्षण दिँदादिँदै हरिसिंह कार्की आफैँ चेजस्तो क्रान्तिकारी हुने निर्क्यौलमा पुगिसकेको थियो । यो कुरो उसको भविष्यवाणी गर्ने लालबहादुरलाई पत्तो भएन । प्रशिक्षार्थीहरूले बिस्तारै कमरेड हरिसिंह कार्कीलाई बुझ्दै थिए ।
प्रकाशित : माघ २५, २०७६ ११:२६